Ọrụ Ụlọ Ọrụ na Sri Lanka bara uru iji malite ọrụ na mba ọzọ
Kụzie ebe ọ bụla na Randstad Company
bipụtara Ụlọ ọrụ Dubai City at April 21, 2018
Ọrụ Ụlọ Ọrụ na Sri Lanka
Hotel ọrụ in Sri Lanka na Ụlọ ọrụ Dubai City. Anyị na na-enyere aka inweta ọrụ na Sri Lanka. Anyị na-arụ ọrụ ugbu a na ụlọ ọrụ dị iche iche na Sri Lanka. N'iburu nke a n'uche, anyị na-achọ aga n'ihu ịnweta CV. Karịsịa site na ndị ọrụ ọhụrụ na-achọ Sri Lanka. Ụlọ ọrụ anyị na-achịkwa ọtụtụ ụlọ ọrụ na ụlọ ọrụ ndị na-adabere n'Eshia.
Achọta ọrụ na Sri Lanka nwere ike bụrụ ihe ịma aka, ọkachasị ndị mba ọzọ. Companylọ ọrụ anyị ga na-eleba anya na ọrụ na Sri Lanka. Na Dubai Companylọ Ọrụ Obodo nchịkọta ọrụ maka ndị ọgbọ ọhụrụ. N'ezie nye ozi banyere nyocha oru n'ime Asia na Middle East. Karịsịa, anyị na-anwa ịduzi gị gaa ọrụ ụlọ ọrụ na Sri Lanka. Ọrụ ntanetị na Srilanka na otu esi enweta ha ụzọ kwesịrị ekwesị. Na oru oge, kwa anyị na-ede banyere ọrụ kacha elu Sri Lanka contracts na ọnọdụ ọrụ.
Maka ohere ọrụ na Sri Lanka, ị ga-ele anya n'ọtụtụ ebe. Site na ụlọ ọrụ ịntanetị ebe ị nwere ike ịchọta ọrụ ntanetị na Sri Lanka maka ọnọdụ dịnụ. Ma ọ bụ ọbụna tinye ihe nkwupụta CV na profaịlụ gị. n'aka nke ọzọ, ọ bụrụ na ị na-achọ oge ọrụ oge na Sri Lanka. I kwesiri ịjụ ajụjụ ma kọọrọ gị ndị ọzọ na-achọ ọrụ na ebe ndị na-achọ ọrụ na mpaghara gbalịa ịbanye n'akwụkwọ-ajụjụ ọnụ.
Ụlọ ọrụ Dubai City maka ndị ọrụ Sri Lanka
Ma ọ bụ, ị nwere ike ịbụ onye ọpụpụ? Ị na-achọ ibi ndụ ma na-arụ ọrụ na Asia. Na Sri Lanka, ị nwere ike ịrụ ọrụ oge na ọmụmụ ihe. Ụlọ ọrụ anyị enyere gi aka ijikwa nyocha oru ubochi na Sri Lanka. Dubai City Ntuziaka ụlọ ọrụ bụ otu n'ime ihe kachasị mma maka ndị ọrụ mpaghara Sri Lankan. Ma bara ezigbo uru maka ndị na-achọ ọrụ na Dubai si Srilanka. Ihe niile ị ga - eme bụ ịchọta. Ọ bụ ọrụ ụlọ ọrụ na Sri Lanka maka gị ?.
Anyị ọkachamara onye ndu maka ndi oru ga-ekpuchi isiokwu dika esi enweta visa. Otu esi achọta ezigbo ụlọ na Asia. Ọrụ na ego dị ka ebe ọrụ ọrụ na bank Sri Lanka. Biko sonye na obodo Dubai City Company maka ndị na-achọ ọrụ. Na-ezute ndị mmadụ dị ka gị. Were ọrụ n'aka ụlọ ọrụ gị ma kọọrọ gị ahụmahụ gị ọrụ ụlọ ọrụ na Sri Lanka.
Isi maka ọrụ na Sri Lanka
Kedu ka nke ahụ ga-esi bie ma rụọ ọrụ na Sri Lanka ?. Mgbe ị na-achọ ọrụ na Sri Lanka. I kwesiri ịma na enwere nnukwu onu ogugu enweghi oru. Ya mere ndị si mba a na-achọ ọrụ n'èzí. N'aka nke ọzọ, ọ bụghị mmadụ nile na-enweta ọrụ. Ya mere ndị mmadụ na-agbalị inweta agụmakwụkwọ ka mma, ọmụmụ ihe ka mma. Dị ka eziokwu, n'ọtụtụ ọnọdụ, ọ naghị enyere ọtụtụ aka.
Ọtụtụ n'ime ndị na-achọ ọrụ ebe ahụ maara nke ahụ. N'agbanyeghị otú ahụmahụ gị ga-esi dị mma. Ị ga-ahazi ngwa gị n'etiti ndị ọrụ Sri Lankans ndị ọzọ. N'akụkụ ọjọọ, ọtụtụ ndị nwere ezi ahụmahụ na Asia. Ọtụtụ na-enweghị ọrụ ka ha dị na-achọ ezigbo ọrụ na Srilanka ma ọ bụ na-arụ ọrụ ná mba ọzọ. Ọzọkwa, ọnụ ọgụgụ na-arị elu nke ndị gụsịrị akwụkwọ n'ógbè ahụ na-achọ ọrụ kacha elu na Sri Lanka. Ya mere, ọbụna obodo a ọrụ dị ịtụnanya na Sri Lanka nwere ezigbo ohere.
Mba a ka na-eto eto ebe n'ihi na azụmahịa. Nwere ike ịchọta ụfọdụ ọrụ na-adọrọ mmasị. Dị ka ọchịchị Sri Lanka si kwuo, e nwere ohere maka azụmahịa. Dịka ọmụmaatụ, na 2018 ha mere atụmatụ na nde mmadụ 9.7 dị mma ịrụ ọrụ. Ndị isi na-achọ ọrụ ka na-anọgide na-abụ onye ọrụ mpaghara. Sri Lanka dị ukwuu dị ka ọrụ mmanye na akụ na ụba Sri Lanka. N'akụkụ dị mma, ihe karịrị 90% ndị mmadụ ejirila ọrụ. Ndi mmadu ndi ozo enweghi oru ma obu ka ha na-acho. N'aka nke ọzọ, nke enweghị ọrụ na Sri Lanka bụ ihe na-erughị 4.20 pasent maka afọ 2018.
Na-arụ ọrụ na ụlọ ọrụ Sri Lanka
Obodo a enwewokwa ọganihu nke ya na mpaghara akụ na ụba. N'ihi nke a, ọtụtụ ụlọ ọrụ na-ahazi ọrụ ọhụrụ afọ ndị gara aga. Ha na-amalite ịchịkwa ya site n'afọ 2000. Mgbe enweghị ọrụ bụ ihe dị ka pasent asatọ. Mgbe ahụ ha na-achọpụta ụzọ dị mma iji mee ka mmetụta dị ịrịba ama dị. N'aka nke ọzọ, Sri Lanka ka nwere oge siri ike iji ọrụ nke ya. Ya mere, nke a mere ha ji ejedebe ụfọdụ ohere ọrụ maka ndị bịara abịa ọhụrụ.
Ịchọta ọrụ na Sri Lanka dịka onye ọrụ ụwa. Ma eleghị anya ọ bụ ọrụ siri ike ịme, ma ọ bụ ihe agaghị ekwe omume. Ọmụmaatụ, Ndị India na-achọta ọrụ na mba a ngwa ngwa. Iji tinye ya n'ụzọ ọzọ, ịnwere ike ịrụ ọrụ na Sri Lanka n'ohere niile dị ka onye ọrụ afọ ofufo. Enwere otutu onyinye, dịka ọmụmaatụ, ị nwere ike akụzi Bekee. Ihe akaebe kasịnụ na-egosi na ị ga-eme ọtụtụ ihe. Mgbe ị na-arụrụ ụlọ ọrụ mba ofesi ọrụ.
Ndị njem na Sri Lanka
Ọ dị mkpa ịghọta nke ahụ ndị si mba ọzọ. Karịsịa site na iji nchịkwa na ahụmịhe sitere na Middle East ma ọ bụ Europe. N'ezie ga- malite ọtụtụ ohere ọrụ N'ezie ngwa ngwa. N'akụkụ ọjọọ, ọrụ ndị dị na Sri Lanka dị mma maka ndị nlekọta. Nke mbụ, ohere ịchọta ọrụ a na Sri Lanka dị elu. N'aka nke ọzọ, ha dị mma karị.
E nwere ọtụtụ Ụlọ ọrụ Sri Lanka na ị nwere ike ịmalite ọrụ. N'ezie, Sri Lanka bụ ebe dị mma maka ndị nlegharị anya. N'okpuru ọnọdụ ndị a, ọ bara uru itinye akwụkwọ maka ụlọ ọrụ ụlọ ọrụ na Sri Lanka. Ebumnuche a ka ọtụtụ n'ime ndị mmadụ na-achọ maka ọrụ nlekọta. Ọtụtụ ndị, ọtụtụ ndị na-ere ahịa ọbụna si Dubai. Na-eche ịchọta ọrụ na ndị nche onwe ha dị ka ile ọbịa na njem nleta. N'ezie, ị nwere ike ịchọ ọrụ na azụmahịa na azụmahịa ụlọ ahịa. Nakwa ọrụ ọma ị ga-ahụ na ndị ahịa niile. Mpaghara ndi di ala bu oru, ego na textiles, na uwe.
Ndụ na ụgwọ na Sri Lanka
Ụdị ndụ na mba a bụ ọ dị mma maka ndị obodo. Mana buru n'uche na ụgwọ ọnwa ga-ala na Sri Lanka. Ọbụna ma ọ bụrụ na ị nweta ọrụ na ụlọ ọrụ dị elu na Sri Lanka. Ị nwere ike ịtụ anya nnukwu ego na-abanye n'ime ụlọ akụ gị. Dịka ọmụmaatụ, ọ bụrụ na anyị jiri Dubai na London tụnyere.
Ya mere echela na ọtụtụ mba ndị dị n'Ebe Ọdịda Anyanwụ. Maka na ọ bụ ahịa dị iche iche ma ọ bụrụ na anyị jiri ya tụnyere Dubai ma ọ bụ Abu Dhabi. N'aka nke ọzọ, ego abụghị nke ọjọọ. Ị nwere ike nweta ọrụ dị ka onyeisi oche. Dịka ọmụmaatụ na ụlọ ọrụ nkwari akụ. Na n'ezie n'ụzọ dị otú a ị ga-eme ọtụtụ ihe.
O nwere ike ị gaghị enwe ike ịzụta ego dị ka onye ọrụ ọrụ na Sri Lanka. Ụlọ ọrụ obodo dị na Dubai mere ụfọdụ nyocha banyere Ọrụ na Srilanka. Na akụkọ anyị banyere ọrụ na Sri Lanka. Ị kwesịrị chọpụta otu esi enweta ọrụ na Asia. Karịsịa na mba Sri Lanka.
Ọrụ maka ọrụ ụlọ ọrụ na Sri Lanka
Mgbe ịmalite ọrụ. O doro anya na ụgwọ gị kwesịrị ikpuchi ndụ dị mma. Inwe ezigbo ụlọ na ụgbọ ala dị mma. Na ụlọ ọrụ kachasị mma na-akwụ ụgwọ na obodo a.
Na ọtụtụ ndị ọrụ mpaghara na-enweta ọrụ a. Ihe kpatara ya bu n'ihi ugwo nke ibi na Sri Lanka. Ọ bụ ebe dị ịtụnanya ị ga-ebi na n'ozuzu ya ezigbo ebe ebe a ga - akwụ ụgwọ gị. Site na India dị mfe karịa iji nweta ọrụ na Sri Lanka karịa njem ndị ọzọ. N'akụkụ dị mma, ị nwekwara ike ịchọta ọrụ na Sri Lanka ugwo oru ugwo. Dịka ọmụmaatụ na òtù ụwa. Na ọtụtụ n'ime nnukwu nzukọ na-akwụ ụgwọ a akwa mba ọzọ, dịka ụgwọ ọrụ dị ala.
Enweghị ọrụ na Sri Lanka? Malite ọrụ na Dubai
N'aka nke ozo, oburu na inwere na Sri Lanka inwere ike chọta ọrụ na Dubai. Anyị ụlọ ọrụ na-enyere ndị na-achọ ọrụ iji nweta ọrụ si Sri Lanka na Dubai. Anyị usoro nyocha oru na-akwadoro ndị si Sri Lanka ka ukwuu. Anyị na-enyere ndị mmadụ aka inweta ọrụ na United Arab Emirates. Ọtụtụ n'ime ndị na-achọ ọrụ ụlọ ọrụ anyị nwere si India. Mana anyị na - enyere aka inweta ọrụ na Dubai Sri Lankan ndị na - achụ nta ọrụ.
Ọ bụrụ na ị bụ achọ ọrụ na Dubai dị ka India. United Arab na-emeghe ohere maka gị. Anyị na-enyere ndị si n'akụkụ ụwa nile aka iji nweta ọrụ na United Arab Emirates. Karịsịa maka ndị na-achọ ọrụ na Abu Dhabi, Dubai, na Sharjah. Ya mere, ọ bụrụ na ị si Sri Lanka, anyị nwere ike ịme maka ezigbo ọrụ na Dubai. Ndị otu anyị ha mere ka ndi mmadu si Pakistan na India. Ya mere na nke a n'uche, ìgwè anyị na-atụ anya itinye gị. Ihe niile anyị chọrọ n'aka gị bụ ọrụ zuru oke. Ya mere ọ bụrụ na ị nwere ike biko dee nkọwa gị na anyị kwaliteghachi ngalaba.
N’aka nke ozo, inwere ike itinye nọmba ekwenti anyi WhatsApp ọrụ dị iche iche. Anyị ụlọ ọrụ na-ewere mbanye mbanye ndị ahịa anyị. I tinyekwasị ya na weebụsaịtị mgbasa ozi na ntanetị, yana Ịntanetị. N'ihi ya, ọ bụ ihe ọzọ ụzọ dị mfe ịchọta ọrụ na Dubai na Abu Dhabi. N'ezie, anyị na-enyere ndị mmadụ aka ịmalite ọrụ na United Arab Emirates.
Kedu ihe ndị ọrụ ga-ahọrọ
Kedu Onye Kwesịrị Ekwesị Nye Gị?
Ọ dị mma ịmalite ọrụ na Sri Lanka?
Nke mbụ n'ime ajụjụ kachasị sie ike ị kwesịrị ịjụ onwe gị. Kedu ụdị ọrụ ka mma maka m Hotel oru diri m nma?. N'ihi na ngalaba abụọ a bụ ndị bụ isi maka ọrụ na Sri Lanka. N'oge ụfọdụ, i kwesịrị ịjụ onwe gị ụdị ụdị ọrụ dịịrị m ?. Enwere m ike ịme ka ọ mee ?. Maka onye ohuru nwere ihe a kwesiri ịdị ezigbo mkpa. N'ihi na azịza nke ajụjụ a bụ onye na-agbanwe ndụ gị. Mgbe ị ga-ekpebi ihe ga-adịrị m mma. Ma olee otu m ga-esi malite ya?
Mana maka ọtụtụ ndị na - achọ ọrụ, usoro nke ịchọ ọrụ abụghị ihe doro anya. Ọtụtụ freshers kwesịrị bido nchọta ọrụ n'oge ụlọ akwụkwọ sekọndrị. Ọzọkwa, ụzọ kachasị mma bụ ịgbaso agụụ mmekọahụ. Ebe ọ bụ na ị malitere ịchọpụta agụụ ihe gị. Ekwesịrị ka ezute gị ya na ndi ozo bu ndi na-enwe ahuma. Offọdụ n’ime ha nwere ike inyere gị aka n’ezie ịkọwapụta ohere ọrụ ga-adị. Nke ahụ nwere ike ịbụ ezinụlọ gị ma ọ bụ onye ọzọ nwere nnukwu ahụmihe.
Kedu ihe nhọrọ kachasị mma?
Iji kwu eziokwu, ma ọ bụrụ na ị na-achọ ọrụ. Should kwesịrị ị ga-eru ọrụ mbụ akwadoro nke ọma. Anyị maara na ọrụ ụlọ nkwari akụ ọ bụ ọrụ siri ike ikpebi. Gaghị amata ihe ga-akara gị mma. Mana imirikiti kọleji ma ọ bụ mahadum. Prekwadebe maka ọrụ izugbe, ọ bụghị maka ọrụ a kapịrị ọnụ. Mana site na nke a, nhọrọ ọrụ adịghị akwụsị. Ebe obu na inweta akwukwo na ulo akwukwo. Na ezigbo akara ule, ị nwere ike nwee otu ọrụ anyị n’ezie n’enye ndi n’achọ ọrụ.
Gbalịa chọpụta nke gị usoro ịhọrọ ọrụ. Tupu ị kpebie ụdị ọrụ Sri Lanka ịchọrọ ịchọta. N'ihi na ndị gụsịrị akwụkwọ ọhụrụ na-achọ ịmalite ọrụ dị elu. Ndị ọrụ niile si mba a banye n'ọrụ ga-enyocha ohere ọrụ dị iche iche. Chọta ọrụ na ọrụ ụlọ akụ na Sri Lanka na ụlọ ọrụ Dubai City.
Srilanka ụlọ oriri na ọṅụṅụ bụ nnukwu azụmahịa. Enwere ọtụtụ hotels na obodo a. Ị nwere ike ịchọta ọrụ n'ọnọdụ ahịa. Mana otu n'ime ọrụ kachasị mma na Srilanka bụ njikwa ọrụ. N'ihi na ọ bụrụ na anyị ga-ewere ọrụ anyị na-enye site na obodo a. Ma, gaa n'ihu ibi na Srilanka n’ezie ibi na paradaịs ọ bụ ezigbo ụzọ iji jikwaa. Na Srilanka, anyị bụ na-enwe akara kachasị elu iji rụọ ọrụ. Ọtụtụ n'ime họtel ndị ahụ dị igo. Enwere nnukwu ebe ị na-azụ ego maka ndị bi. Site na nkpa na ndi oru nkuzi ruo n’ọkwa ọrụ ndị isi. Ihe niile ị nwere ike ịchọta mgbe ị na-arụ ọrụ n'ụlọ ọrụ nkwari akụ ụlọ ọrụ Srilankan.
Dubai City Company na-arụ ọrụ na ụlọ ọrụ dị iche iche maka ọrụ ụlọ ọrụ na Sri Lanka. Karịsịa ndị sitere na ụlọ ọrụ nkwari akụ. N'aka nke ọzọ, ọ bụrụ na ịnweghị ike ịchọta ọrụ n'aka anyị. Ụlọ ọrụ anyị emeela ezigbo nnyocha maka ụlọ nkwari akụ ụlọ ọrụ ụgwọ na Sri Lanka. Ikwesiri ilebanye anya na ụlọ ọrụ ụlọ ọrụ nkwari akụ na-arụ ọrụ na Sri Lanka. Ndị otu anyị ga-akarị ihe kpachara anya ma ọ bụrụ na ịchọta ọrụ na Sri Lanka. Lelee ntuziaka anyị banyere otu esi achọ ọrụ na nkwari akụ na Sri Lanka.
Chọta ọrụ na ọrụ ụlọ akụ na Sri Lanka.
Ọrụ na Jetwing Hotels Ọrụ na Sri Lanka
Etlọ ndị a na-akpọ Jetwing na Sri Lanka bụ ebe izizi ọrụ. Companylọ ọrụ a na-arụ ọtụtụ ndị ọrụ ọhụụ. You nwere ike ibido njem na ụlọ ọrụ a na Sri Lanka. Otu n'ime ụlọ nkwari akụ kachasị mma maka ọrụ na-akwụghachi ụgwọ na ụlọ ọrụ na-eleba anya na ụlọ ọrụ na-eme nke ọma na Sri Lanka
Ọ bụrụ na ị bụ na-achọ ito ngwa ngwa. Shouldkwesiri ịtụle ụlọ oriri na ọ Jụ Jụ Jet nku maka ọrụ gị. Hotelslọ nkwari akụ ndị Jetwing nwere akụkụ mpaghara njem nlegharị anya nke agwaetiti ahụ. N'akụkụ aka nke ọzọ ọtụtụ ego ọhụụ ga-egbu ụlọ ọrụ a.
N'ihi na ha ka ị nwere ike nweta otu kachasị ụtọ na ohere. You g'esite na ọrụ ebube jupụta zute ndị si gburugburu ụwa ma nwee ezigbo ego. Ọ bụrụ na nke a bụ gị lekwasịrị anya ?. Gị na ụlọ ọrụ ahụ, ị ​​ga-abụ onye mmụọ nsọ ruo mgbe ebighi ebi. Site n'otu n'ime ụlọ oriri kachasị mma n'ụwa. Ọzọkwa, na Srilanka, ụlọ ọrụ a maara ama ama ogologo oge gburugburu ọrụ. Ma otu n'ime ihe kachasị mma maka ọrụ na njem na ile ọbịa.
Na Jetwing Hotels, karịrị mpako ịbụ ụlọ nke ọbịa nke Sri Lankan. Ndị Jetwing Hotels bụ na-enyere ọhụrụ gụsịrị akwụkwọ. N'ihi na ha kwenyere na ọ dị mkpa ịkwado onye ọ bụla gụchara akwụkwọ ọhụrụ. Na ọganihu ọrụ na Mmemme Mmepe ya na ụlọ ọrụ a bara uru ka o bido. Companylọ ọrụ a ga-enwe mmetụta maka ọrụ na Sri Lanka.
Ọrụ Ụlọ Ọrụ na Cinnamon Sri Lanka
Hotellọ oriri na ọnamụ Theụ cinnamon nwere ọnụnọ mpaghara siri ike. Ọtụtụ ndị mba ọzọ na-arụ ọrụ ya na ika ya. Maka ọrụ na Sri Lanka, ụlọ nkwari akụ a yiri ezigbo echiche. Ụlọ ọrụ ahụ ịzụlite ọtụtụ ọrụ ọhụụ. N’aka nke ọzọ, njikwa nke ụlọ ọrụ a na-ejikwa nnukwu ego tinye nnukwu ego. Ha na-arụ ọrụ karịa klaasị kpakpando 2400 na ihe karịrị afọ 40 nke ahụrụ ọbịa.
N’ikwu okwu, ụlọ ọrụ na-achọ ịkwagharị azụmahịa maka mmụba na-adịgide adịgide. Buru nke a n'uche, enwere ike idobe expats ohuru. Yabụ ọ bụrụ na ị nwere agụụ maka ịrụ ọrụ na Sri Lanka. Karịsịa na ụlọ ọrụ na-ele ọbịa. Ikwesiri ibido oru gi ya na Cinnamon Hotels & Resorts. N'ihi na ha na-eduga na ụlọ ọrụ.
Lọ oriri na nkwari akụ ahụ bụ ụdị ndụ obibi maka maka ọrụ na Sri Lanka. Ọ bụ ezie na gị na ha ga-arụ ọrụ ịkwesịrị iwepụta ahụmịhe Eshia. Ọrụ ụlọ nkwari akụ na Sri Lanka ya na ụlọ ọrụ a dị mma.
Anyị na nzukọ a ihe kachasị elekwasị anya bụ ndị ọrụ. Yabụ ọ bụrụ na ị na-achọ ịnụ ụtọ ndụ ọrụ na Sri Lanka. Should kwesịrị ịgbalị ịbanye na ụlọ ọrụ a.
Hotellọ nkwari akụ a, n'aka nke ọzọ, nwere mmetụta siri ike na Eshia. Ya mere ha maara etu esi adọta ndị nwere ike ịbụ ndị si ụwa niile bịa. Mgbe ị na-amalite ọrụ na cinnamon na nkwari akụ ị ga-mkpa ịkekọrịta ọhụụ na cinnamon. Ndi otu anyi dụọ ọdụ ka ndị na-achọ ọrụ ọhụụ na-achọ ọrụ na ha.
A ọrụ na Theme Resort & Spa
Na Srilanka, enwere mgbe niile ebe ndi mmadu puru iche. Karịsịa na ụlọ ọrụ nkwari akụ. Ọ bụrụ na ị bụ otu n’ime ha ma na-achọ ọrụ. Shouldkwesiri ịhapụ ọrụ ọkachamara gị na Theme Reso & Spa. Karịsịa ma ọ bụrụ na ị bụ ndị ọrụ iduziri ndị ahịa.
Isiokwu ntụrụndụ & Spa. Knowledgelọ ọrụ ihe omuma nke Okwu bu igodo izu oke. Ọ bụrụ na ị na-enwe ezigbo ihe ọmụma banyere ụlọ ọrụ nkwari akụ. Tinye na CV emelitere gị. Ọzọkwa, ndị nwere oke mmasị ijere ndị ọzọ ozi ka amachara na njem a. Companylọ ọrụ a na-akwalite ndị rụpụtara ihe dị elu. Ma oburu n’enye gi otu uzo ha. Ga-akwụghachi gị ụgwọ, n ’ụzọ ọ bụla e si ekwu okwu ahụ.
Dị ka eziokwu, ha nye aka oru aka. Site na nkuzi oru na nkuzi rue nkuzi ndi isi. Ma ndị chọrọ ịbịarute ọbụna karịa na ọrụ ha. Nwere ike itinye n'ọrụ ohere larịị c larịị ọrụ na weebụsaịtị ha.
Ghọta ma gbaa ndị ọzọ ume na ọrụ dị iche iche. Na ụlọ ọrụ a ga-akwụ ụgwọ iche. Ebe ọ bụ na ọ bụghị ihe niile mmadụ na-egosiputa omume na ịba uru maka ndị ahịa. Nwere ike inwe nnukwu ike n’ime ndị ọrụ Rthe esort. Ezigbo mma maka ọrụ ụlọ nkwari akụ na Sri Lanka.
Ọrụ na Mount Lavina Hotel
Ugwu Lavina Hotel inwe ọdịnala siri ike na Sri Lanka. Ọ bụrụ na ị na-achọ ọrụ n'ime ụlọ ọrụ nkwari akụ ụlọ a na-ahụ maka ugwu Lavinia Hotel dị mma. A maara ụlọ oriri na ọ forụ hotelụ a maka ihe nketa ya. Ọzọkwa, enwere ọtụtụ ndị ịtụnanya ndi bi na Sri Lanka na aru oru ika a. Yabụ, ọ bụrụ na ị na-achọ ọrụ mmepe siri ike. Can nwere ike ịghọ otu n’ime ndị otu ya ndị otu ma bụrụ ndị ọrụ raara onwe ha nye.
N'akụkụ na-adịghị mma, ịkwesịrị inwe ezigbo ike maka arụmọrụ ụlọ nkwari akụ. Hotellọ akụ Mount Lavina, emeela ụlọ nkwari akụ ahụ dịka otu kachasị mma na Sri Lanka. Ndị isi na họtel ahụ kwenyere na o nwere nnukwu ọrụ maka ha. Yabụ ihe niile kwesịrị ịdị n'ọnọdụ, n'agbanyeghị ihe na-aga na họtel ugbu a. Ihe niile kwesiri ịdị na ebe ọ bụla ga-agbasi mbọ ike ịrụ ọrụ larịị n'ụlọ nkwari akụ.
Ngwurugwu isi ụlọ ọrụ na-adabere na ịzụ ndị ọrụ ha. N'ikwu okwu n'ozuzu iji mee ya ka mma maka ndị ahịa ha. Ọtụtụ n'ime ndị ọrụ ha kwenyere na ikike nke ụlọ nkwari akụ bụ isi ihe. N'akụkụ na-adịghị mma, ihe manager's na-eke otu ha. O nweghi ọtụtụ ihe ka mma. Maka ndị ọrụ ọ bụla na-arụ ụlọ ọrụ a, a ga-enye ọzụzụ ọhụụd. Ebe ọ bụ n’ị sonyere ndị otu ị ga-enye ha ọtụtụ ihe. Ma ị nwere ike ịtụ anya n’aka ha na ndị otu ga - eme ka atụmanya gị bukwuo ibu. Ezigbo ụlọ ọrụ maka ọrụ ụlọ ọrụ na Sri Lanka.
Mmechi maka Sri Lanka Hotel Career
N'agbanyeghị ọzụzụ na mgbalị ị ga-eme. Ọrụ dị na hotels nke Sri Lanka doro anya mee ka ndu gi ka nma. Karịsịa ma ọ bụrụ na ị na-achọ ọrụ ogologo oge na Sri Lanka. Industrylọ ọrụ nkwari akụ na-enye ohere dị ịtụnanya. Iji maa atụ, inwere ike ịbụ onye mbịarambịa n’otu ụbọchị. You nwere ike ịmalite ọrụ na Sri Lanka, mana ị nwere ike kwụsị ebe ezigbo oyi di ka Dubai ma ọ bụ Abu Dhabi na United Arab Emirates. Bido n’obodo nkwari akụ na Sri Lanka ya na ụlọ ọrụ anyị.
Citylọ ọrụ Dubai City na-enye ezi nduzi maka Ọrụ na Dubai. Ndị otu anyị kpebiri ịgbakwunye ozi maka asụsụ ọ bụla maka nke anyị onye ọrụ na expats. Yabụ, site na nke a n'uche, ị nwere ike nweta ugbu a nduzi, ndụmọdụ na ọrụ na United Arab Emirates na asụsụ nke gị.